Ikamelo elithokomele ekhaya ledolobha elibukekayo - I-Airbnb
Ikamelo elithokomele ekhaya ledolobha elibukekayo
Cork, County Cork, i-Ireland
Ikamelo elihlanzekile nelinethezekile elinombhede olala abantu ababili, ikhabethe, isibuko eside, ibhokisi lama-drawer nesihlalo, elibheke igceke elincane elingemuva.
Indlu incane futhi ithokomele, futhi isivakashi sikwazi ukufinyelela ekhishini/ezindaweni zokupheka. Omunye umuntu kuphela ohlala endlini, nenja encane.
I-wifi esheshayo kakhulu kuyo yonke indlu.
Okuthandayo kwesikhashana kuvumela kuphela (ubuningi benyanga eyodwa)
Lena yindlu endala enhle endaweni enhle kakhulu, esanda kulungiswa futhi yavuselelwa.
Indlu itholakala e-Douglas Village, ngaphansi kwamakhilomitha angu-5 ukusuka enkabeni yedolobha le-cork. I-The Village inezitolo eziningi, izindawo zokudlela, ama-bar, ama-take-aways, ama-hairdresser, izitolo zokuzilungisa kanye nezitolo zokosa. Kukhona umzila webhasi osuka edolobhaneni uya enkabeni yedolobha futhi uye ohlangothini olusenyakatho lwedolobha. Kunepaki elihle nendawo ehlathini ngaphesheya komgwaqo ukusuka endlini.
Ngiyajabula ukukhuluma nezivakashi futhi ngibanikeze usizo nokusikisela edolobheni nasezindaweni ezizungezile
Hlola ezinye izinketho ezise- Cork namaphethelo